Hlola iTanzania - World Tourism Portal
Okufanele ukwenze eTanzania
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eTanzania.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeTanzania
Bukela ividiyo ekhuluma ngeTanzania
Hlola iTanzania izwe elikhulu kunawo wonke eMpumalanga Afrika, elinganiselwe yi Kenya kanye ne-Uganda enyakatho; IRwanda, iBurundi, kanye neDemocratic Republic of the Congo kuya entshonalanga, kanye neZambia, iMalawi kanye neMozambiki eningizimu.
Lesi ngesinye sezindawo ezindala ezaziwa ngokuqhubekayo ngokuhlala eMhlabeni; izinsalela zabantu nezinsalela zangaphambi komuntu zitholakele emuva kweminyaka engaphezulu kwezigidi ezimbili. ITanzania kukholakala ukuthi bekugcwele imiphakathi yabazingeli, mhlawumbe abantu abakhuluma isiCushitic nesiKhoisan. Cishe eminyakeni eyi-2000 eyedlule, kukholakala ukuthi abantu abakhuluma isiBantu baqala ukufika bevela entshonalanga ne-Afrika ngokulandelana kokufuduka. Kamuva, abafundisi abangama-Nilotic bafika, futhi baqhubeka nokuthuthela kuleya ndawo ngekhulu le-18th.
Izwe elinamaphethelo ngokweqile, iTanzania inezindawo eziphakeme kakhulu (Mount Kilimanjaro), indawo ephansi kakhulu (umbhede wechibi leLake Tanganyika), kanye nengxenye yechibi elikhulu kunazo zonke (iLake Victoria, okwabiwe ne-Uganda ne Kenya) ezwenikazi lase-Afrika.
Isimo sezulu saseTanzania siyahlukahluka kusuka kokuswakeme nokunokushisa ezindaweni ezinamabala aphansi, njengeDar es Salaam, kuya kushisa phakathi kwemini futhi kupholile ebusuku Arusha. Azikho izinkathi ezibonakalayo, njengobusika nehlobo - kuphela izinkathi ezomile nezimanzi. ITanzania inezinkathi zemvula ezimbili: Izimvula ezimfishane kusuka ngasekupheleni kuka-Okthoba kuze kube sekupheleni kukaDisemba, aka-Mango Rain, kanye nezimvula ezinde kusuka ngoMashi kuya kuMeyi.
Izikhathi ezinhle zokuhambela yilezi:
NgoJuni kuya ku-Agasti: Lokhu ukuphela kwenkathi yemvula ende futhi isimo sezulu sihamba kahle ngalesi sikhathi sonyaka - siyakwazi ukubekezelelwa phakathi kosuku futhi kupholile kusihlwa. Kodwa-ke, lesi akusona isikhathi esihle sonyaka sokuphephiswa, ngoba amanzi maningi emapaki futhi izilwane aziphoqiwe ukuba zibuthane ezindaweni ezimbalwa ukuze ziphinde zinikeze umfutho, njengoba zenza phakathi nenkathi yemvula ngemuva kukaKhisimusi.
NgoJanuwari kuya kuFebhuwari: Lesi isikhathi esihle sokuvakashela i ISerengeti. Imvamisa ngalesi sikhathi lapho imihlambi emikhulu yezinyoni zasendle, i-zebra ne-buffalo ifudukela ezindaweni ezingamadlelo angcono. Ungabona ezinye zezilwane zasolwandle eziyizigidi ezingama-1.5 ezihlala eSerengeti ziqala uhambo lwazo oludumile. Yaziswa ukuthi lesi isikhathi esishisa kunazo zonke eTanzania, lapho abantu bendawo bekhononda ngokushisa. Uxwayisiwe!
Ipaki Kazwelonke Yase-Arusha - Ikhaya eliphakeme kunazo zonke i-5th liphezulu e-Afrika, Mt. IMeru (4,500m). Ungayigibela ngokuzimela.
Ipaki Yesizwe YaseMahale - Bona amaChimpane asondele futhi azwe amanzi acwebile eLake Tanganyika.
Mount Kilimanjaro - Inani eliphakeme kakhulu e-Afrika kanye nentaba ephakeme kunazo zonke emhlabeni. Ungayikhuphuka ngosizo lomhlahlandlela.
Indawo Yokulondolozwa Ngorongoro - ifaka iNgorongoro Crater kanye ne-Olduvai Gorge
Ipaki Yezwe lase-Udzungwa
Kunezikhumulo zezindiza ezimbili ezinkulu; esisodwa eDar es salaam, iJulius International International Airport (ngaphambili eyayaziwa njengeMark Julius K. Nyerere International Airport kanye neDar es Salaam International Airport), nesinye e- I-Kilimanjaro, I-Kilimanjaro International Airport, okuphakathi kwesiyingi phakathi kweJozi neMoshi.
Uma uqasha imoto lapho ufika lapha, inketho yakho enhle imoto ye-4 × 4 yezokusetshenziswa kwezemidlalo enomgwaqo omuhle, ikakhulukazi uma uhlela ukuqhubeka nohambo kunoma yimuphi amapaki ezwe. Bheka i-Land Cruiser, iHilux Surf (4Runner), nezimoto zeRange Rover.
Uma ufuna ukuqasha imoto yama-safaris zasendle eTanzania, kuyalulekwa ukuthi uthole imoto ye-4 x 4 nge umhlahlandlela wohambo oluchwepheshe. Abanye babaqondisi bezinkambo bakhuluma izilimi ezingaphezu kweyodwa njengesiNgisi nesiJalimane, isiNgisi nesiFulentshi, iSpain nesiNtaliyane. Izinzuzo zokuhamba ngomhlahlandlela ulwazi ngemvelo ngoba zisetshenziselwa, ulwazi lwezinhlobo zezilwane zasendle, ukunakekela imoto ngoba useholidini, akudingeki ukuthi ungene esikhundleni sokufaka uthaya olubi.
Ngenkathi useTanzania ungahlelela uhambo lwakho lokuya kulo ISerengeti namanye amapaki kaZwelonke ngentengo efinyelelekayo. Uma kunohambo olulodwa oluzoshintsha umbono wakho ngempilo, luhambo lwase-Afrika. Xhumana nabanye babaqhubi bezokuvakasha ngemininingwane ye-Safari.
I-Cultural Tours Touring Tanzania ngesiko yinhle ngokuthokozisayo njengoba ihlanganisa ngaphezu kwezinhlanga zama-150 +. Kukhona inala yokudla kwendabuko, imikhuba yamasiko (njengokuzingela ngama-bushmen, ukufuya izinyosi, umuthi wendabuko) umuntu akujabulela ngaphakathi kwemingcele. Uzothola futhi uvakashele inani lezindawo ngokuvamile abantu abangazazi ngokuphelele. Uma kwenzeka ungumuntu othanda ukuhlola umhlaba futhi uhlangane nabantu abasha ukuze uthole ulwazi ngamasiko ahlukile, ukuvakasha kwamasiko ngokuqinisekile kuyindlela engcono kakhulu yokuvakasha. Izinsizakalo azibizi futhi zingabonakala ukuthi zingabizi kakhulu kunalokho okulindelwe uma nje uthola ulwazi olufanele lokuthi uzohlala kuphi, izinkampani ezihamba phambili zabavakashi kanye nolwazi lokuthi yini oyifunayo. Ngale ndlela, kuzokongela isikhathi nezindleko zakho.
Kunenqwaba yamaPaki kaZwelonke alabo abafuna ukubuka izilwane zasendle zaseTanzania. Ungathola ukungena cishe kwe- $ 100 US futhi uzuze kuhambo (futhi mhlawumbe nokuhlala ebusuku). Amapaki angcono, noma egcwele abavakashi, atholakala enyakatho yezwe. Ipaki Yesizwe YaseRuaha iyona ehamba phambili eningizimu (abantu bendawo empeleni bathi lesi yipaki elihle kunazo zonke, ikakhulukazi uma ufuna ukubona izilwane zasendle ngokungafani nezalabo abangatheni emapaki asenyakatho). Ungagxiliwe nje esifundeni sabavakashi enyakatho; iningizimu inikela ngamapaki amakhulu namadolobha (zisekele ngaphandle kwase-Iringa), futhi uzozizwa ungaphansi kwesivakashi nokuningi kwesivakashi uma uhamba ngale ndlela.
Ukutshontshelwa kwe-Scuba ngaphakathi nasezindaweni ezizungeze iPemba neZambia kungenye into enhle.
Ungavakashela nezingosi eziningi zomlando weSigqila Sokuhweba, ezingenza kube nokuthakazelisa, uma kungukucindezela okuncane, uhambo.
Amabhishi: Ubuwazi ukuthi iTanzania inamabhishi amahle kunawo wonke, angahlafuneki emhlabeni? Ziyamangaza, nesihlabathi sazo esimhlophe, izihlahla zamasundu, namanzi apholile oLwandlekazi lwaseNdiya!
Kayak amanzi amahle asogwini opharetha wokuvakasha.
I-Tanzania ineziza ezimbili ezinhle kakhulu ze-Stone Age emhlabeni: Isimila Gorge (eduzane nase-Iringa) kanye nezibonelo zakudala ezaziwayo zobuciko bomuntu phakathi kokudwetshwa kwamatshe, eduze kwaseKolo, enyakatho yeGoli - ezinye zazo ezibhekwa njengezineminyaka engu-30,000 ubudala .
ILilimanjaro ingenye yezindawo eziheha iTanzania. IKilimanjaro iyintaba ephakeme kunazo zonke e-Afrika. Abavakashi abaningi beza eTanzania ukuzobiza le ntaba enhle. Inani eliphakeme kakhulu lilinganiselwa ukuthi yi-5895m ephezulu okwenza kube yinselele yangempela kwabakhwela izintaba.
ITanzania yizwe elinamapaki amakhulu ezwe, lapho ungabona khona ezinye zezimbali nezilwane ezinhle kakhulu zase-Afrika. ITanzania iyikhaya lamapaki kazwelonke amaningi kanye nokugcinwa kwemidlalo. ISafaris yaseTanzania ingafakwa ezigabeni ezimbili, iNyakatho Circuit (Serengeti, Ngorongoro, Manyara neTarangire) neSouthern Circuit (Selous, UMikumi futhi IRuaha). Lokhu ngokuqinisekile kuwukubheka ngokweqile lokhu futhi akubandakanyi ezinye ezithokozisayo kodwa okunzima ukufinyelela amapaki anjengeKatavi neGombe, ukubiza amabili nje. Kubavakashi, amaqembu amabili okuqala ayatholakala.
I-Camping safaris Tanzania: Ukuhamba ngamatende yindawo yokuhlala ekhethwe ngabakholoni ngesikhathi seMedieval ngoba ngaleso sikhathi iLodges namahhotela bezingakakhiwa kahle. Abantu be-adventure badabula umhlaba wonke ukuthola izici ezinkulu zeJografi e-Afrika njengeMount Kilimanjaro, iGreat Rift Valley, isigodi saseNgorongoro namanye amakamu asetshenziswe kakhulu. I-Camping safari isebenzisa amatende njengesiphephelo sokuhamba kwangaphandle kanye nocwaningo lwasehlane. Kulezi zinsuku ikamu lokuhamba lisetshenziswa njengendawo yokuhlala yezilwane zasendle eTanzania nase-Afrika eLarge. Kunezinhlobo zokukanisa i-safaris ezifana namakamu okunethezeka okunethezeka, i-safe camping safaris kanye ne-budget yokumisa amatende. Budget camping safari yaziwa nangokuthi amakamu ayisisekelo amatende kanye nezindleko eziphansi ze-safaris Tanzania. Uhambo lwamabhajethi lokuhamba ngesabelomali lushibhile uhambo lwasendle zasendle kanye uhambo olude e-Afrika.
Ukubona izindawo odinga ukuhambisa kuzo, Ukuqasha imoto kuyisivumelwano.
Ukuqashwa kwezimoto eTanzania kuzokusiza ukuthi usuka kwenye indawo uye kwenye uyokubona izinkambo noma izinkambo zasendle. Izinhlangano eziningi zokuqasha izimoto zinikezela ngokuqashwa kwezimoto ngezinhloso ezihlukile. Ungaqasha imoto ngokubuka ukubona i-Town noma i-game park safaris.
Ibhajethi yokukanisa i-safaris
Lokhu kuyindlela eyisisekelo yokuhamba lapho izivakashi zivakashela amapaki kazwelonke kanye nezinqolobane zemidlalo futhi indawo yokuhlala isemakamu abekelwe isabelomali. Ama-safe amatende wokugcina imali ahlukile kusuka ku-Tour Operator kuya kwenye.
Ukubukwa Kwezilwane zasendle eTanzania:
ISerengeti National Park, eyenziwe yaziwa ngabantu abaningi be-Discovery Channel specials, ibamba izilwane zasendle ezahlukahlukene, kufaka phakathi amabhubesi, izingulule, izingwe, imvubu, izindlovu, i-zebra, i-buffalo, umhluzi wamanzi, izingwenya, amagwababa, ama-warthogs, nezinyoni zasendle. Okunye okukhanga kakhulu ukufuduka kwasemanzini, okwenzeka ngokuqhubekayo phakathi kweSerengeti neMasai Mara (Kenya). Imali yokupaka yi- $ 50 / umuntu / usuku kusukela ngoJulayi 2008, futhi umhlahlandlela onemoto yokushayela yama-4 uyadingeka. Uma ukufuduka kuyinhloso yakho enkulu yokuvakashela i-Serengeti, kufanele ululeke inkampani yakho yezokuvakasha ngoba lokhu kungadinga ukuhamba kakhulu futhi kungabiza kakhulu.
Indawo Yokulondolozwa Ngorongoro nayo ibamba inqwaba yezilwane zasendle, ikakhulukazi esigodini saseNgorongoro. Kwenziwe umsebenzi ofanayo wentaba-mlilo owakhiqizayo I-Kilimanjaro kanye neGreat Rift Valley, iNgorongoro inezindawo eziphakemeyo ezungeze isigodi (ezinothile ngezindlovu) kanye ne-crater uqobo (izilwane ezifanayo ne-Serengeti, kepha ezindaweni eziphakeme ezinabantu abaningi obhejane abamnyama). Imali yokupaka yi- $ 50 / ngosuku / umuntu ukusuka ngoJulayi 2007, kanye ne- $ 200 ngemoto ngayinye yokushayela umdlalo wamahora ayisithupha crater.
Ipaki Yesizwe YaseRuaha kanye neSelous Game Reserve aziwa kakhulu kepha kumnandi kakhulu. Uzothola izilwane zasendle ezinhlobonhlobo ezinkulu kakhulu kunendlela obewungeke waziqonde ngayo eSerengeti, uma ufuna indawo enabavakashi abambalwa la mapaki angawakho. IRuaha yaziwa ngokuba nenani elikhulu lendlovu nomndlulamithi kunoma yiliphi ipaki e-Afrika futhi ihlala ihamba ngegama elithi 'Giraffic Park', futhi kuyindawo enhle yokubona izintambo ezinkulu zamabhubesi nezinja eziyindida nezingafuneki. Ngaphezu kwalokho, iSelous ukuphela kwendawo ngaphandle kweNgorongoro lapho ungabona obhejane. Ungavakashela nase-Uduzungwa Mountain Park ukuthola indawo eyihlane eyiqiniso ngokusebenzisa indawo engatholakali futhi ebukekayo. Zimbalwa izindawo ezisele emhlabeni njengalesi. Njengoba kuvulwe amasango amasha ohlangothini lwepaki lase-Iringa ngokukhulu ukukhempa kuyisengezo esihle kunoma yikuphi ukuvakasha kweTanzania.
ITarangire National Park isesifundeni esenyakatho neTanzania futhi yaqanjwa ngegama lomfula iTarangire ogeleza phakathi kwepaki. Indawo yepaki icishe ibe ngu-2,600 sq km. Fana no ISerengeti; ipaki inezinto ezigxile kakhulu zezilwane zasendle phakathi nenkathi eyomile. Futhi, ngaphezu kwezinhlobo zezinyoni ze-570 zikhonjwe, futhi indawo ngokuqinisekile yipharadesi lababambeli bezinyoni. Indawo yokuhlala yeSafari iyatholakala ezindlini zokulala ezisezingeni eliphezulu kanye namakamu.
Lapho uvakashela amapaki ezilwanyana zasendle qiniseka ukuthi uhlala eduze kwezindawo ezibukwayo (enkabeni yamapaki) futhi uhambe ngokushesha ngangokunokwenzeka ekuseni njengoba izilwane zivame ukusebenza kakhulu ngokushesha nje lapho kuphuma ilanga.
Iziqhingi - izintaba eTanzania
Ulimi olusemthethweni nolimi olusemthethweni ngolimi lwesiSwahili, olukhulunywa ngaphezu kwe-90% yabantu. IsiNgisi sinesikhundla esithile esisemthethweni - sisetshenziswa kwezentengiso yakwelinye izwe, kwezokuxhumana, ezinkantolo eziphakeme, futhi njengendlela yokufundisa ezikoleni zamabanga aphakeme naphakeme, yize uhulumeni waseTanzania ehlela ukuyeka isiNgisi njengolimi lokufundisa ngokuphelele.
Amakhadi Esikweletu angasetshenziswa kuphela emahhotela amakhulu, ezindaweni zokungcebeleka nakubathengi abathile bokuhamba. Ngamafuphi, iTanzania isewumphakathi onemali.
Kunezimakethe eziningi emadolobheni abavakashi abathengisa izimpahla ezijwayelekile "zase-Afrika". Ubucwebe obuhlotshisiwe, insimbi eqoshiwe, nezingubo zokulala zaseMasai zenza izipho ezinhle. Yazi ukuthi iningi lezinkuni "ze-ebony" lingelona elenkohliso (ipulasitiki yezicathulo) - okuhlukile ngaphandle eningizimu-mpumalanga yezwe, lapho isizwe saseMakonde seTanzania naseNyakatho neMozambique sakha imaski nokunye okuqoshiwe okuvela ngokhuni nasebandleni. Zilungiselele ukuxoxisana ngakho konke. Amaski awafani namaqembu amaningi ase-East Africa, futhi lawo owathola ezimakethe athengiswa avela eNtshonalanga Afrika noma ayizinto eziyinqayizivele ezenzelwe izivakashi nje, ngaphandle kosomaskandi beMakonde.
Imidwebo kaTinga Tinga, eqanjwe ngegama lomdwebi owasungula leso sitayela, ithengiswa yonke indawo. Isitayela sabo esiyingqayizivele nemibala yakhela izikhumbuzo ezinhle. Kunesikole saseTinga Tinga eDar es Salaam, lapho ungathenga khona imidwebo kubaculi uqobo.
Ukudla - isiphuzo eTanzania
Ngokuvamile, izivakashi kufanele zigqoke izingubo ezinesizotha noma ezinobukhazikhazi, ikakhulukazi eZanzibar, okuwumphakathi wamaSulumane ongaqondakaliyo. Abesifazane baseNtshonalanga akufanele bagqoke izingubo ezembula isikhumba esiningi. Ama- 'Kangas', izindwangu ezimboze ngemibala egqamile, ayabizi, ayatholakala ezweni lonke, futhi angasebenza njengesembozo esiqondayo.
Abantu abangamaMasai, ngezingubo zabo ezimibalabala, bahlose ukuqondiswa kwanoma yisiphi isivakashi ngekhamera. Kodwa-ke, balindele ukukhokhelwa ngakho, futhi kufanele uhlale ubuza ngaphambi kokuthatha izithombe.
Ukuxhumana lapho uhamba eTanzania akuvamile ukuba yinkinga. Ungathola ukwamukelwa okuhle kweselula ngisho nakwamanye amapaki ezwe.
Amakhekhe e-Intanethi ajwayelekile futhi avamile kulo lonke elaseTanzania. Zitholakala kalula ezindaweni ezinkulu zasemadolobheni, njenge Dar es Salaam ne Arusha.
Ukuxhumana ngakwamanye amazwe kunomthamo ophansi, futhi kungathembeka.
Amanxiwa aseKilwa Kisiwani kanye namaRuwa aseSongo Mnara
Itshe Ledolobha laseZanzibar
Izindawo ze-Kondoa Rock-Art